प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि कसको पावर कति ? | DNFMEDIA
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि कसको पावर कति ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फाल्गुण ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ वहस सुरु भएको छ । पुनस्र्थापनाको पक्षमा देशभर खुशियाली छाएको छ तर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उनी पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ताले भने चित्त दुखाएका छन् । सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरे पनि उनीहरुले अब पनि राजनीतिक स्थिरता कायम नहुने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
ओलीले आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसद रहेको र बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकार निर्माण हुने सम्भावना नभएकाले संविधानमा सरकार गठनसम्वन्धी भएका अन्य प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री नभए देश नै संकटमा पर्ने र अरुले सरकार चलाउन नसक्ने भनेर हावादारी गफ गर्दै आएका उनको लागि पौष ५ गतेबाट दिनगन्ती सुरु भएको विश्लेषण गर्न पनि थालिएको छ । ओलीले पार्टी भित्रका खराव नेताहरु पाखा लागेकाले अब आफूलाई काम गर्न सहज भएको भन्न पनि छोडेका छैनन् तर आफूहरुले सरकारलाई कुन काममा चाँहि अवरोध ग¥यौं भनेर अर्को पक्षले पटकपटक सोध्ने प्रश्नको उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन् । ओलीले आफूले वैशाखमा घोषणा गरेको निर्वाचनमा आफ्नो दुई तिहाई आउने र बाँकी काम पूरा गर्ने भन्दै जनतालाई फेरि पनि आश्वासन दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुँदा अहिलेको अवस्थामा उनी अल्पमतमा पर्ने छन् । दाहाल–नेपाल समूहले अर्को पार्टी बनाए भने ओलीको सरकार संकटमा पर्ने निश्चित छ । ओली र नेकपाको अर्को पक्षले पनि कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहहादुर देउवासँग पटकपटक छलफल गर्दै आएका छन् ।
यो बेलामा कसको सरकार बनाउने वा यही सरकार राख्ने कि ढाल्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस निर्णायक बन्ने छ । संसदमा नै कसको शक्ति कति हो भनेर देखाउने होडमा सबै राजनीतिक दलहरु लागिपरेका छन् ।
Previous: ओरालोतिर ओली
Next: फेकनमा जितेकी दीपाले के के गर्छु भनिन् ?